Collage Mugadziri muZimbabwe
Gadzira Mahara Collage Mugadziri Widget Kune Yako iPhone Kana iPad
Uri kutsvaga nyowani nyowani mugadziri asi usingazive pekutangira? Nhau dzakanaka ndedzekuti kune dzakawanda sarudzo kunze uko. Nekutsvagisa kudiki iwe unowana iyo yakakwana karagi inogadzira inosangana nezvido zvako. Zvese zvaunoda kuti uite kuziva zvaunoda. Ramba uchiverenga kuti udzidze zvakawanda nezveyemugadziri wemifananidzo collage iyo yemahara online.
Kana iwe uchida kuyedza maoko ako pane ekugadzirisa mapikicha maturusi, IOS inopa karagi inogadzira iyo yakasununguka kurodha pasi. Vhura iyo Collage Mugadziri kubva kuruboshwe kuruboshwe paneji uye sarudza dhizaini dhizaini kana template kuti utange. Ziva kugadzikana kweiyo yemahara IOS inoshanda sisitimu. Uya neako chiitiko chekugadzirisa mifananidzo kune iyo nyowani nyowani nekubata kwebhatani.
Dzakabatanidzwa ma collages akagadzirwa neiyo Android chishandiso. Mifananidzo yakatorwa nedhijitari kamera inogona kushandurwa kuita yakasarudzika, zvisikwa zvehunyanzvi nesimba reApple software yakanakisa uye mushandisi-inoshamwaridzika interface. Shandisa yemahara Android foto yekugadzirisa mapurogiramu kugadzira yakanakisa mifananidzo yekuratidzira. Unogona kushandura mafoto ako nematimu, mavara, uye mamiriro. Kugadziriswa kunosanganisira kubviswa kweziso dzvuku, chena chiyero kururamisa, uye kurima.
Collage Layouts inopa yakanaka nzira yekugadzirisa yako Android kifaa. Aya ma collages anoshanda pamwe nesarudzo yeyakajairwa maAicons emifananidzo uye mapikicha. Preset yemifananidzo kana mapikicha anogona kusarudzwa uye kuunzwa kunze kuti akurumidze kugadzira iyo kollaji. Izvi zvakanaka kuti ushandise sechimwe chikamu chemudziyo wako.
Yakakura yekugadzira zvipo zvakagadzirwa nemaoko uye mharidzo dzisingakanganwike, yemahara Android kollaji inogadzira app inobvumira vashandisi kuendesa mapikicha uye vagadzire avo akasiyana akasiyana magadzirirwo. Mifananidzo yakatumirwa kunze uye maposta anogona kushandiswa semashure, embellishments, kana mukugadzirwa kwemapuzzle emazamu uye mazes. Iko hakuna muganho kune kugona kunogoneka. Mahara anopiwa neiyo ecosystem ecosystem zvinonakidza kutaura zvishoma. Vashandisi vanogona kuwana zvese kubva pane zvinamirwa kusvika kumapikicha uye marongero emahara pasina muripo.
Yakakwana yekugovana paFacebook neTwitter, Android inopa vashandisi kugona kuisa mapikicha avo uye kugadzira inoshamisa mapikicha emifananidzo ine chete yekudzvanya bhatani. Mifananidzo yakatorwa inogona kugadzirwazve kuti ikwane chero saizi. Sarudza kubva kwakasiyana mafonti akasununguka uye madingindira, kusanganisira Google's classic font, Times New Roman, uye nevamwe vazhinji.
Mahara Instagram stickers anowanikwa kuti ushandiswe neiyi kholaji yekugadzira app. Iyo yemahara Instagram dhizaini inouya neiri nyore kushandisa interface. Iyo yepamutemo Instagram account ndipo panogona vashandisi kuisa mapikicha uye kugovana navo neshamwari. Zvekuwedzera mashandiro, vashandisi vanogona kusarudza kuti iyo Instagram dhizaini ioneke setiketi pane ese avo madivisi. Iyo inogadzira kollaji inogona kusetwa kuti igadzire madingindira matanhatu akasiyana, anosanganisira mhuka, ruva, hunhu, nzvimbo, mutambo, uye katuni.
Iyo online online mupepeti senge Google Mifananidzo inobvumira vashandisi kugadzirisa uye kugadzirisa mapikicha. Iine online online mupepeti, kunyangwe iye mucherechedzo wevapikicha anogona kuumba inoshamisa makaraji marongero. Kusiyana nevamwe vapepeti vemapikicha epamhepo, iyo yekushongedzerwa neyekugadzira mifananidzo inobvumira vashandisi kuti vatarise dhizaini vasati vadzima, vachichinja, kana kuwedzera zvishongedzo kumufananidzo. Izvi zvinopa vashandisi mukana wekuita chero shanduko dzavanoda vasati vaita sarudzo yekupedzisira. Mapikicha ekugadzirisa mapikicha epamhepo anopa nzira iri nyore yekugadzirisa uye yekuchinja mapikicha. Nekuwedzera, kugadzirisa, uye nekuchinja mapikicha, kunyangwe mupikicha mutsva anogona kuumba inoshamisa makaraji marongero.
Kusiyana neyemahara vhezheni yeiyo yepamutemo Instagram pikicha mupepeti, iyo yemahara vhezheni yeiyo kolaji yekugadzira app inogumira kune diki diki yeakafanogadzirwa-akagadzirwa collages Iyo pikicha mhariri inopawo akati wandei maficha asina kuwanikwa mune yemahara vhezheni senge kuburitsa uye kupinza kunze kwemifananidzo. Mune yemahara vhezheni yemufananidzo mupepeti, mumwe anofanirwa kupinza pikicha uye osarudza kubva pre-yakagadzirirwa muunganidzwa wemifananidzo. Mumwe anofanirwa kuita sarudzo yekugadzira iyo kollaji.
Kuti utore mukana weanoshamisa mashandiro eaya anoshamisa Apple IOS kunyorera, mumwe anofanirwa kutenga rezinesi yechigadzirwa. Kusiyana nezvakawanda zvekutengesa mapikicha ekugadzirisa, iyo yemahara vhezheni yecollage maturusi maturusi anogona chete kugadzirisa mune yakasarudzwa fomati - JPEG. Iwo maosapp anokubvumidza iwe kugadzirisa mune akawanda mafomati anosanganisira PICT, TIFF, EPS uye PNG. Vazhinji nyanzvi dzekutora mifananidzo vanoshandisa maturusi aya kugadzira mifananidzo inoshamisa kubva pakunakira imba yavo. Iwo maturusi anoshanda zvakafanana neaya anoshandiswa muAdobe.
Idzi ndidzo dzimwe dzenzira dzekugadzira yemahara ficha kholaji yekugadzira majeti. With izvi unogona personalize iPhone wako kana iPad. Unogona kuishandisa kugadzira mifananidzo inokatyamadza nyore. Ingo dhawunirodha iyi inoshamisa application ikozvino uye unakirwe nerusununguko rwekugadzirisa.